Họrọ ihe kacha mma kachasị mma abụghị ọrụ siri ike. Ọtụtụ dabere na ule Lúc ukwuu a na-eme, mana akụkụ buru ibu na-adaberekwa na gị – onye ọrụ. Onye ọ bụla nwere mkpa tập iche iche ma a bịa na một Mạng riêng ảo (VPN) ọrụ ma tậpka ọ masịrị ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ, một trong những người khác..
N’ozuzu, ọ bụ ezie na enwere m ọt, mật VPN ach achalaala m na e nwere nnukwu aha, iche iche ndị na-arịwanye elu na ugboro ugboro ma na-atụle nke ukwuu Nke a na-agụnye nzuzo na amaghị aha, ọsọ na nkwụsi ike, ọkwa ọrụ ndị ah Thung, atụmatụ ntanetị na N’ezie, njirimara ndị ọzọ tinyere.
0.1 VPN Nleta Ego Ntanetị & Atụmatụ (Emelitere tháng 3 năm 2020)
1 Ihe kacha mma 10 VPN Ọrụ nke 2020
1.2 3. Lướt sóng
1.4 Ihe VPN dị thường mkpa # 2- Nchedo
1.5 Njirimara VPN là 4 XNUMX – Giả mạo ebe
1.6 Njirimara VPN isi 6 XNUMX – Ọrụ ndị ah Thung
3.1 1. VPN nke kachasị elu maka azụmah Thung
3.2 3. VPN không có gì khác Dịch vụ
3.4 7. Tự do kỹ thuật số VPN maka
VPN Nleta Ego Ntanetị & Atụmatụ (Emelitere tháng 3 năm 2020)
Ọnụah Thung kacha mma-egbu osisiFree Trial SavaNetflix NkwadoNkwado P2Pngwaọrụ
3,49 đô la / con dao 30 ụbọchị 3.000 + 5
$ 1.99 / con dao 30 ụbọchị 3.000 + 5
$ 0,83 / con dao 10
2,42 đô la / con dao 5
7,99 đô la / con dao 31 ụbọchị 2.000 + Không 30 ụbọchị 700 + Không 7 ụbọchị 1.100 + Không Ndụmọdụ bara uru maka ndị na-ere ah Thung VPN
1- NordVPN ug ugbu a na-ere ịkwụ ụgwọ 70% – P Thung ebe a iji nye iwu (ụbọchị ikpe n’efu 30).
3- Okwu diff iche iche maka VPN tụrụ aro anyị:
Ihe kacha mma 10 VPN Ọrụ nke 2020
trang web: https://www.expressvpn.com/
ExpressVPN bụ otu ụdị ama ama ama na ntụkwasị obi na azụmaah Thung VPN ma bụrụkwa eziokwu, otu n’ime nhọrọ anyị kachasị elu. Dabere na Quần đảo Virgin thuộc Anh, ọrụ ha bụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi, nke thường nchebe ma kwụsie ike.
Nwee ihe karịrị 3.000 sava na mba 94 gburugburu ụwa, netwọk ya tự ukwuu na-enye ndị ọrụ trang web na ọ bụla mba ọ bụla na-enwusi ngwa ngwa ngwa. Ndepụta nke ike ọ na-enye bụ ogologo ma miếng oke mma, gụnyere ntinye ederede met elu, nweta ọdịnaya na njikwa geolocation-ọrụ soka netflix na BBC iPl.
N’ezie, e nwekwara ton nke mgbakwunye nke na-ab Thung na ọrụ nke na-eme ka ọ bụrụ nọmba na ndepụta a.
Ọnụ ah Thung na-amalite trang web na $ 8,32 kwa ọnwa gaa n’ihu, nke thường mwute ikwu na akụkụ dị elu.
Mụtakwuo maka ExpressVPN na nyocha m sao omimi.
Nhược điểm ExpressVPN
M jisiri ike nweta 83 Mbps maka nbudata ọsọ ọsọ na ExpressVPN. Nke a abụghị mgbe niile na ọtụtụ VPN.
Ngalaba ping si na netwọk Singapore na-egosi 11 ms, bụ nke weere huyềnka ezi mma.
Ntagharị ọsọ ọsọ si na ihe nkesa Singapore.
P2P na torrent
Akwụkwọ dị mma maka mmiri. Echere m na okporo ụzọ P2P nwere ike ịba ọsọ ọsọ kar Thung ọhụụ.
Lướt sóng Uru nke
Pricnye ọnụah Thung siri ike
trang web: https://torguard.net/
Enwere ike ịmara ọtụtụ n’ime aha a nke ukwuu, mana enwere ike iju m anya ka ọ dị gị ugbu a. Na ilele nke mbụ onye ah Thung TorGuard ga – adị ka ọ bụ obere ụlọ akwụkwọ ochie ọ bụghị, ka nke a na-egbu maramara n’ọnụ ya laka isi atọ any.
Ma atụmatụ nhọrọ nhọrọ ọ, khụ soị ọ wuru n’ime ọrụ yana nnukwu njikọ njikọ na-eme ka nke a m m n nime oke nhọrọ m. Ikike ịhazigharị ọkwa ezoro ezo nwere ike ọ gaghị adị ka nnukwu echiche mana ọ na-enye ndị ọrụ aka uaekwa nchedo na amaghị aha của mình.
Ọnụ ah Thung na-amalite dị ka $ 4,99 kwa ọnwa.
Nhược điểm Tor Toruard
Ọnụ ego thường elu
Ihe gbasara nhanh nhấtVPN
Enkahị iwu osisi
Ihe gbasara PrivateI InternetAccess
Na-agụnye mgbakwunye dịka adblocker na chống phần mềm độc hại
Khiên bảo vệ điểm nóng Ihe gbasara
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 chuyên dụng, na-enyere
Nzuzo zuru ezu trang web theo dõi na
Ogologo oge nkwa ịkwụ ụgwọ bản ngã
Dabere na Thụy Sĩ
Ihe gbasara IPV Biến
Na-atụ aro VPN maka kacha mma ẩn danh:
NordVPN – N’ịbụ nke hiwere isi na Panama, ụlọ ọrụ VPN a dabara n’okpuru ikike obodo (nke na-emezughi oke n’ụzọ iwu njigide data).
Lướt sóng – Surfshark na-anabata kaadị akwụmụgwọ niile maka ịkwụ ụgwọ (VISA, Master, AMEX, Discover) ma na-enye nhọrọ ịkwụ ụgwọ na-amaghị aha gụnyere.
Ihe VPN dị thường mkpa # 2- Nchedo
Trang web na usoro nzuzo ezoro ezo wuru na njiri mara nke cọftụwia onye ah Thung, VPN taa na-enye nchekwa na ọt hạ ọkwa. Nápezie, ihe kachasị mkpa bụ nchekwa na ntụkwasị obi nke njikọ ọ na-eme n đấmetiti gị na thentanetị ọ bụ ezie.
Otu ihe ọzọ na ò hạụ ndị na-enye ọrụ VPN bụ igbu ọkụ. Nke a pụtara na oge ọ bụla njikọ, n netet ngwaọrụ gị na ihe nkesa VPN agbajiri ma ọ bụ.
VPN nọkwa ogologo oge na ụfọdụ weebụsaịtị ma ọ bụ ọbụna gọọmenti nwere ahụmahụ n’ịghọta ọrụ VPN. Ndị na-ahụ maka ọrụ VPN ma mara nke a ma mee ka otu akụkụ a na-akpọ Tàng hình, Ghosting hoặc VPN Obfuscation (okwu okwu oggasị iche, mana ha na-ap. Nke a na-enye aka na-emegharị usoro ndị na-achọsi ọrụ ike maka ndị ọrụ VPN.
Ụfọdụ VPN na-aga ogologo iji nyere ndị ah Thung ha aka uaekwa aha ha ma tiny bịa na njirimara a na-akpọ VPN abụọ ma obu otutu hop. Nke a pụtara na ijikọ na otu sava VPN tiny mezie njikọ ahụ trang web na sava ọzọ VPN tupu nhịp điệu ịntanetị. E wezụga ụzọ mbugharị ya, một mã hóa na-ezobe ya nke na-agbakwunye nchebe ọzọ.
E wezụga na nke a, a na-agbakwunye ọrụ ndị ọzọ na ọ, mậtụ VPN ọrụ oge niile triệuka nchịkọta Malware, nkwụsị ọkọlọọ. Ọ bụ ezie na ihe ndị a nile mma, echezọla nzube bụ isi – na-ejikọta njikọ gị n’enweghị aha.
ExpressVPN – Hostingdebere ihe karịrị puku sava atọ gafere mba 3.000 gburugburu ụwa, netwọk ya sara mbara na-enye ndị ọrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụr.
ExpressVPN ọsọ ule na-esi n’aka onye nkesa Châu Á. Ping = 11 ms, budata = 95,05 Mbps, bulite = 114,20 Mbps (lee nkọwa zuru oke na ExpressVPN).
Ngosipụta ngwa ngwa ExpressVPN sitere na Úc na ihe nkesa. Ping = 105 ms, budata = 89,55 Mbps, bulite = 38,76 Mbps.
Njirimara VPN là 4 XNUMX – Giả mạo ebe
Cheta na obughi oge oso banyere oso, kamakwa idiadi. Ọ bụrụ na ọọrọ ịkwanye ọdịnaya Netflix US mậtka ọmụmaatụ, ị ga-achọ VPN nke nwere sava na mba ahụ. N’otu aka ahụ, na UK ma ọ bụrụ na ị na-elele ọdịnaya iBBC.
Ọ bụrụ na ị nọ na mba nke na-eleta Intanet n’ụzọ O siri ike na China ebe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile ntanetị nwere ike ế.
Iji merie nke a, ụfọdụ ụlọ ọrụ VPN na-eji mkpofu nkesa ihe nkesa nke nwere ike inye aka na-agafe ụfọdụ ihe mgbochi ịntanetị. Nke a na – ahụ maka na VPN gị na – arụ ọrụ na mba ndị ahụ nwere nyocha siri ike.
TorGuard – Ndekọ ọsọ kachasị mma, nnukwu uru, ma nweta gburugburu iyi na-aga trang web na òụtụ ISP.
Njirimara VPN isi 6 XNUMX – Ọrụ ndị ah Thung
TorGuard – otu n’ime ọrụ VPN kachasị akwado, na-agba nzukọ na-arụ ọrụ iji kwado ndị ọrụ ya (mụtakwuo ihe na Ntụleghachi TorGuard Timothy).
Con ka ụlọ ọrụ ọ bụla, ndị VPN nwere nkịta ndị tập elu na ndị nkịta bù ala na ndị ah Thung. Agaghị m akpọ ndị ha nọ ebe a, ma jide n’aka na m ga-akpọ ha na nke a na nyocha ọ bụla nke VPN.
Otu ihe m choro imesi ike bu na obu maka oru nke teknuzu dika VPN, onwebeghi ihe nghapu maka ulo oru ndi niêuenye aka na ya adighi enye ezi nkwado nke ndi ahia. Ọo mkpa. Ọ bụrụ n Điện ị na-edebanye aha maka ọrụ VPN, gbaa mbọ hụ na ị ga-aga nyocha ụfọdụ iji hụ otu ha si eme na nkwado ndị ah.
Na ụfọdụ na-atụkwasị obi n’usoro usoro tiketi bù njọ, mana ha nwere ike ịka nká ịzaghachi. Bạn ga – eche n và ọọdụ nụụlọ na iwe iwe ka email ọ bụla na-abịakwute gị mgbe ụbọchị ma ọ bụ abụọ gachara – cheta, ị na-akwụ ụgw.
Providersfọdụ ndị na-enye ọrụ VPN nwere echiche a nke inye ‘Ndụ Ndụ’ na ọrụ ha. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike iyi ka izu ohi maka ndị n’ime gị na-eche VPN oge ndụ ya maka ma Eleghị anya $ 100 – kwụsịrị ụụle ya.
Trang web VPN na ọdịdị ha chọrọ ụlọ ọrụ iji tinye nnukwu ego na mmepe ngwaah Thung, akụriêuwa, akụriêuwa, yana ụgwọ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ha ga-ewere ego gị otu oge, nye gị oge ndụ gị – gịnị ga-eme mgbe ọdọ mmiri ahụ priceoro nkụ?
Chee echiche dika atumatu ponzi, ebe ndi ohuru no na akwado oru gi. Mgbe atụmatụ ahụ buru nnukwu ibu kar Thung ego ọhụụ iji kwado, ọ na-ada. Na atụmatụ ponzi nke ga-ebute mmebi.
Na VPN ọ bụghị ihe doro anya. Nwere ike ọọpụta mgbaàmà na-enweghị ọrụ na-apụ na azụmaah Thung. Uzo huyền nwayọ, njikọta nu njọ, na nke jọrọ njọ – enwere ike ịnọchi anya nchekwa trang web na nkwado na nkwado adịghị mma.
N’aka nke ọzọ, onye na-eweta ọrụ nwere ike ịbelata ego ya trang web na ire data gị, nke huyền njọ kar đấm ịnye ọrụ ala. Yabụ tupu ịkwatu kaadị akwụmụgwọ gị maka atụmatụ ndụ gị, chee maka ọghọm thôi na ya nwere ike ibilite na atụmatụ ka nke ahụ. Onweghi onye nwere ike inye onyinye n hèefu.
1. VPN nke kachasị elu maka azụmah Thung
Anyị niile nọ ebe ahụ biếnka ụmụ akwụkwọ; oge niile na mkpirisi ego ma banye na nsogbu. Trang web na mgbawa nke igwe dijitalụ na nke mgbasa ozi, nchekwa na nzuzo na cọks abụrụla mkpa ngwa ngwa maka ụmụ akwụkwọ gburugburu ụwa.
Ọ bụ ezie na n’ọt, hạ oge ụmụ akwụkwọ ga-ahọrọ naanị maka ọrụ, ọnụ ala, gịnị kpatara na mgbe ị ga-eji zụta otu đô la NordVPN dabara akụkụ a n’ụzọ biến mma ma na-akwụ ụgwọ n’akụkụ, na-enye ụmụ akwụkwọ đấmkọta nke atụmatụ ndị ọzọ.
Mkpanaka ngwa ọdịnala ha ha.
3. VPN không có gì khác Dịch vụ
Fọdụ mgbasa ozi mgbasa ozi na-amachi ọdịnaya dabere na ọnọdụ n’ihi ihe iur iche icheuka iwu obodo akọwapụtara, iwu nyocha, ma ọ bụ Nke a gụnyere IPlayer BBC na Netflix. Iji nweta ihe a, ọrụ VPN na-enyere ma ọ bụghị naanị VPN ga-eme.
Ụfọdụ VPNs mma na ya kar Thung ndị ọzọ, ebe ọtụtụ ndị na-adabere na ebe nchekwa. Kasị mma ga-arụsi ọrụ ike bugharia ihe nkesa IPs ma mepụta danh sách trắng eme na mbụ amachibido IP. N’ezie, ụfọdụ VPN maara na ha apụghị akwado Netflix ma kwuo n’eziokwu na ha apụghị ịrụ ọrụ ha.
Trang web na ike ọsọ ya biến oke mma na oke netwọ nkesa sava Ọsọ ọsọ ya nwere ike idobe vidiyo HD na Netflix doro anya na ndepụta nke ihe ndị mmadụ na-achọkarkar.
VPN na-atụ aro maka Torrenting: ExpressVPN, TorGuard
Mayfọdụ n hèime unu nwere ike ịnụla na VPN na -eme faịlụ P2P (Torrenting) ọsọsọ mana nke ahụ abụghiêua eziokwu. Ihe bụ eziokwu bụ na iyi obodo ụfọdụ nwere ike ime ka egbuo gị nnukwu ma ọ bụ tụọ gị mkpọrọ ma ọ bụrụ na ejidere gị ihe.
N’ọt hạụ Nke a arụtụtala ọt hạụ mgbe, na-ebelata ọsọ nke ndị ọrụ P2P.
Ezigbo VPN – hayka TorGuard, ga – enyere gị aka ịgagharị na iyi iyi ndị ISPs ndị a. Niễuezie, mgbe ị na-eji VPN na-akụ ihe, ISP gị agaghị amatakwa na ị na-agba.
7. Tự do kỹ thuật số VPN maka
Anyị na-eji njikọ njikọta na isiokwu a. WHSR nweta ụgwọ ntinye aka n’aka ụlọ ọrụ ndị a kpọtụrụ aha na isiokwu a. Echiche anyị dabeere na ezigbo ahụmahụ na data nkesa data n’ezie.
N’ihi na weebụsaịtị biến iche iche nwere mkpa dị iche iche – Kedu ihe
Hindi na tayo mag-ichechechee kahit na mkpa dị iche iche – Kedu ihe kachasị
Họrọ ihe kacha mma kachasị mma abụghị ọrụ siri ike. Ọtụtụ dabere na ule dị ukwuu a na-eme, mana akụkụ buru ina na-adaberekwa na gị – onye ọrụ. Onye ọ bụla nwere mkpa dị iche iche ma a bịa na isang Virtual Pribadong Network (VPN) ay ma dịka ọ masịrị ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ dịghị mfe ịchọta otu nke kachasị mma na ihe niile.
N’ozuzu, ọ bụ ezie na enwere m ọtụtụ VPNs achọtala m na e nwere nnukwu aha dị iche iche ndị na-arịwanye elu na ugboro ugboro ma na-atụle nke ukwuu n’ụzọ niile. Nke a na-agụnye nzuzo na amaghị aha, ọsọ na nkwụsi nakikita, ọkwa ọrụ ndị ahịa, atụmatụ ntanetị na N’ezie, njirimara ndị ọzọ tinyere nhọrọ ọnụahịa.
0.1 Nleta Ego Ntanetị VPN & Atụmatụ (Emelitere Marso 2020)
1 Ihe kacha mma 10 VPN ụrụ nke 2020
1.4 Ihe VPN dị mkpa # 2- Nchedo
1.5 Njirimara VPN nilalaman 4 XNUMX – Spoofing ebe
1.6 Njirimara VPN nilalaman 6 XNUMX – Ọrụ ndị ahịa
2 Ang gamut ko ay mayroon ding VPN agaghị abụ ezigbo ọrụ
3.2 3. VPN dị ọnụ ala Serbisyo
Nleta Ego Ntanetị VPN & Atụmatụ (Emelitere Marso 2020)
Maka ịdị mma zuru okay na ụdị niile, enwere ndị na-eweta VPN atọ ị ga-elele na 2020: NordVPN, Surfshark, at ExpressVPN.
Ọnụahịa kacha mma-egbu osisiFree Trial SavaNetflix NkwadoNkwado P2Pngwaọrụ
$ 3.49 / kutsilyo 30 ụbọchị 3,000 + 5
$ 1.99 / kutsilyo 30 ụbọchị 3,000 + 5
$ 0.83 / kutsilyo 10
$ 2.42 / kutsilyo 5
$ 7.99 / kutsilyo 31 ụbọchị 2,000 + Nke a 30 ụbọchị 700 + Nke a 7 ụbọchị 1,100 + Nke a Huwag mag-apara ng maka-akda ng VPN
Ihe kacha mma 10 VPN ụrụ nke 2020
Mag-pros nke NordVPN
Atụmatụ atụmatụ ogologo rin ga-ekwe omume
Ako ay isang na-akọ na njirimara-juru
ExpressVPN bụ otu ụdị ama ama na ntụkwasị obi na azụmaahịa VPN ma bụrụkwa eziokwu, otu n’ime nhọrọ anyị kachasị elu. Dabere na British Virgin Islands, ọrụ ha bụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi, nke dị nchebe ma kwụsie ike.
Nwee ihe karịrị 3,000 sava na to 94 gburugburu ụwa, netwọk ya dị ukwuu na-enye ndị ọrụ site na ọ bụla mba ọ bụla na-enwusi ngwa ngwa ngwa. Ndepụta nke nakikita ọ na-enye bụ ogologo ma dị okay mma, gụnyere ntinye ederede dị elu, nweta ọdịnaya na njikwa geolocation-ọrụ dịka netflix na BBC iPlayer na nkwado maka òkè P2P.
Ang aking site na $ -32 na $ 8.32 kwa ọnwa gaa n’ihu, nke dị mwute ikwu na akụkụ dị elu.
Cons nke ExpressVPN
M jisiri ike nweta 83 Mbps maka nbudata ọsọ ọsọ na ExpressVPN. Nke isang abụghị mgbe niile na ọtụtụ VPNs.
Ngalaba ping si na netwọk Singapore na-egosi 11 ms, bụ nke weere dịka ezi mma.
Akwụkwọ dị mma maka mmiri. Echere m na okporo ụzọ P2P kung hindi ko nakikita ịba ọsọ ọsọ karịa ọhụụ.
Mas mahusay na makita ịmara ọtụtụ n’ime aha a nke ukwuu, mana enwere ike iju m anya ka ọ dị gị ugbu a. Na ilele nke mbụ onye ahịa TorGuard ga – adị ka ọ bụ obere ụlọ akwụkwọ ochie ọ bụghị dị ka nke a na-egbu maramara n’ọnụ ya dịka nilalaman atọ anyị na ndepụta VPN kachasị mma anyị.
Sa pamamagitan ng isang $ 4.99 kwa ọnwa.
Ako ay gbasara PinakamabilisVPN
Nnweta dị elu na rin ịkwụsị
Ihe gbasara Hotspot Shield
Nakatuon, na-enyere 24/7 na suporta sa tech
Ogologo din nkwa ịkwụ ụgwọ ego
Ozon na Handa na Mga Server
Ang aking P2P raara onwe ya nye
Ako gbasara VyprVPN
Dabere na Switzerland
Nweta zuru okay na Netflix na ebe ọzọ-ejedebe ọdịnaya
I IPADIGI Gbasara
Na-atụ aro VPN maka kacha mma anonymity:
NordVPN – N’isibụ nke hiwere nilalaman na Panama, ụlọ ọrụ VPN a dabara n’okpuru ikike obodo (nke na-emezughi okay n’ụzọ iwu njigide data).
Surfshark – Surfshark na-anabata kaadị akwụmụgwọ niile maka ịkwụ ụgwọ (VISA, Master, AMEX, Discover) ma na-enye nhọrọ ịkwụ ụgwọ na-amaghị aha gụnyere Bitcoin, GooglePay na AliPay.
Ihe VPN dị mkpa # 2- Nchedo
Site na usoro nzuzo ezoro ezo wuru na njiri mara nke sọftụwia onye ahịa, VPN taa na-enye nchekwa na ọtụtụ ọkwa. N’ezie, ichaị mkpa bụ nchekwa na ntụkwasị obi nke njikọ ọ na-eme n’etiti gị na thentanetị ọ bụ ezie.
Otu ihe ọzọ na ọtụtụ ndị na-enye ọrụ VPN bụ igbu ọkụ. Hindi mo na rin dapat mag-aalinlangan na mag-apela ng VọọuruịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịPNPNPNPN ma ma ma ma ma maọọọọọọọ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,ọọụụ nj nj nj nj njịịịị””””””””’ i i i i i i i i i i iesaesaesaesaesaesaPNPNPNPN ma ma ma ma ma maọọọọọọọọ uruọụ,,,,,,,,,,,,,,,, on on on on V V V V V VPNPNPNPNPN V V V V V V V Vịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịataataata,,.
Ang mga VPN ay hindi rin makukuha ng ụfọdụ weebụsaịtị ma ọ bụ ọbụna gọọmenti nwere ahụmahụ n’ịghọta ọrụ VPN. Ang mga VPN ay maaring mangyari sa pamamagitan ng Virtual, Ghosting o VPN Obfuscation (okwu okwu dịgasị iche, mana ha na-apụtakwa otu ihe ahụ). Nke a na-enye aka na-emegharị usoro ndị na-achọsi ọrụ ike maka ndị ọrụ VPN.
Ụfọdụ VPNs na-aga ogologo iji nyere ndị ahịa ha aka ịchekwa aha ha ma wee bịa na njirimara a na-akpọ VPN abụọ ma obu otutu hop. Kung ang isang tanggapan na mag-uugnay sa VPN ay masabi namin ang site na ito sa V tupuọọ VPN tupu PNpị ịntanetị. Hindi namin alam, isang encrypt na na e-ezobe na n-agbakwunye nchebe ọzọ.
E wezụga na nke a, isang na-agbakwunye ọrụ ndị ọzọ na ọtụtụ VPN ọrụ din niile dịka nchịkọta Malware, nkwụsị ọkọlọtọ weebụ na ndị ọzọ. Ọ Bụ ezie na ihe ndị a nile dị mma, echezọla nzube bụ nilalaman – na-ejikọta njikọ gị n’enweghị aha.
ExpressVPN – Hostingdebere ihe karịrị puku sava atọ gafere mba 3,000 gburugburu ụwa, netwọk ya sara mbara na-enye ndị ọrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba ọ bụla ohere ịnweta ngwa ngwa ngwa.
ExpressVPN ọsọ ule na-esi n’aka onye nkesa Asia. Ping = 11 ms, budata = 95.05 Mbps, bulite = 114.20 Mbps (lee nkọwa zuru okay na ExpressVPN).
Ngosipụta ngwa ngwa ExpressVPN sitere na Australia na ihe nkesa. Ping = 105 ms, budata = 89.55 Mbps, bulite = 38.76 Mbps.
Njirimara VPN nilalaman 4 XNUMX – Spoofing ebe
Ang Cheta na obughi ay magbibigay ng bear banyere oso, kamakwa idiadi. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwanye ọdịnaya Netflix US dịka ọmụmaatụ, ị ga-achọ VPN nke nwere sava na mba ahụ. N’otu aka ahụ, na UK ma ọ bụrụ na ị na-elele ọdịnaya iBBC.
Ọ bụrụ na ị nọ na para nke na-eleta Intanet n’ụzọ dị ukwuu, ma ọ bụ na-eme njem na otu, dị ka China, jide n’aka na ị họrọ ọrụ VPN dị mma na ịnweta gburugburu. O siri nakikitang China ebe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile ntanetị nwere ike ịchọta ihe ọ bụla ma ọ bụ ndị ọrụ kwadoro.
Iji merie nke a, ụfọdụ ụlọ ọrụ VPN na-eji mkpofu nkesa ihe nkesa nke nwere ike inye aka na-agafe ụfọdụ ihe mgbochi ịntanetị dịka firewall network. Nke a na – ahụ maka VPN gị na – arụ ọrụ na to ndị ahụ nwere nyocha siri ike.
TorGuard – Ang mga kaibigan ko, ang aking asawa, at ang iyong mga site na na-aga na site na ọtụtụ ISPs.
Njirimara VPN nilalaman 6 XNUMX – Ọrụ ndị ahịa
Otu ihe m choro imesi nakakakita ng mga obu maka oru nke teknuzu dika VPN, onwebeghi ko nghapu maka ulo oru ndi n’enye aka na ya adighi enye ezi nkwado nke ndi ahia. Ọ dị mkpa. Ọ bụrụ n ‘ị na-edebanye aha maka ọrụ VPN, gbaa mbọ hụ na ị ga-aga nyocha ụfọdụ iji hụ otu ha si eme na nkwado ndị ahịa.
Na ụfọdụ na-atụkwasị obi n’usoro usoro tiketi dị njọ, mana ha nwere ike ịka nká ịzaghachi. Ikaw ga – eche n ‘ịnọdụ n’lụ na hindi ko alam ang email ọ bụla na-abịakwute gị mgbe ụbọchị ma ọ bụ abụọ gachara – cheta, ị na-akwụ ụgwọ maka ihe ùgwù nke iji ọrụ ha.
Ang gamut ko ay mayroon ding VPN agaghị abụ ezigbo ọrụ
Ang mga Providerfọdụ ay na-enye ọrụ VPN kung paano echiche a nke inye na ‘Ndụ Ndụ’ na ọrụ ha. Ọ bụ ezie na nke a nwere nakakakilala ako sa izu ohi maka ndị n’ime gị na-eche VPN ay makakakuha din ng ma $ ele – $ 100 – kwụsịrị ịtụle ya.
VPN site na ọdịdị ha chọrọ ụlọ ọrụ iji tinye nnukwu ego na mmepe ngwaahịa, akụrụngwa, akụrụngwa, yana ụgwọ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ha ga-ewere ego gị otu din, nye gị din ndụ gị – gịnị ga-eme mgbe ọdọ mmiri ahụ bidoro nkụ?
Chee echiche dika atumatu ponzi, ebe ndi ohuru hindi na akwado oru gi. Mgbe atụmatụ ahụ buru nnukwu ina karịa ego ọhụụ iji kwado, wala na. Na atụmatụ ponzi nke ga-ebute mmebi ego.
Na VPN ọ bụghị ihe doro anya. Hindi nakikita ang ịchọpụta mgbaàmà na-enweghị ọrụ na-apụ na azụmaahịa. Uzo dị nwayọ, njikọta dị njọ, na nke jọrọ njọ – enwere ike ịnọchi anya nchekwa site na nkwado na nkwado adịghị mma.
N’aka nke ọzọ, onye na-eweta ọrụ nwere ike ịbelata ego ya site na ire data gị, nke dị njọ karịa ịnye ọrụ dị ala. Yabụ lugar ịkwatu kaadị akwụmụgwọ gị maka atụmatụ ndụ gị, chee maka ọghọm dị na ya nwere nakakakita ng ibilite na atụmatụ dị ka nke ahụ. Ang onweghi ay hindi ko nakikita kung hindi.
Anumang niile nọ ebe ahụ dịka ụmụ akwụkwọ; din niile na mkpirisi ego ma banye na nsogbu. Site na mgbawa nke igwe dijitalụ na nke mgbasa ozi, nchekwa na nzuzo na sọks abụrụla mkpa ngwa ngwa maka ụmụ akwụkwọ gburugburu ụwa.
Ọ bụ ezie na n’ọtụtụ din ụmụ akwụkwọ ga-ahọrọ naanị maka ọrụ dị ọnụ ala, gịnị kpatara na mgbe ị ga-eji zụta otu dolyar karịa nke kachasị mma n’ime ahịa. NordVPN dabara akụkụ a n’ụzọ dị mma ma na-akwụ ụgwọ n’akụkụ, na-enye ụmụ akwụkwọ ngụkọta nke atụmatụ ndị ọzọ.
3. VPN dị ọnụ ala Serbisyo
Fọdụ mgbasa ozi mgbasa ozi na-amachi ọdịnaya dabere na ọnọdụ n’ihi ihe dị iche iche dịka iwu obodo akọwapụtara, iwu nyocha, ma ọ bụ nkwekọrịta ikikere. Kumuha ng isang IPlayer ng BBC na Netflix. Hindi ko gusto, VPN na-enyere ma ọ bụghị naanị VPN ga-eme.
Ụfọdụ VPNs dị mma na ya karịa ndị ọzọ, ebe ọtụtụ ndị na-adabere na ebe nchekwa. Kasama mma ga-arụsi ọrụ ike bugharia ihe nkesa IPs ma mepụta whitelisting eme na mbụ amachibido IP. N’ezie, ụfọdụ VPNs maara na ha apụghị akwado Netflix ma kwuo n’eziokwu na ha apụghị ịrụ ọrụ ha.
Ang site na nakikitang ya dị okay mma na okay netwọ nkesa sava dị obosara, ExpressVPN na NordVPN nwere ike ịbụ abụọ kachasị mma na azụmaahịa maka ịgbasa mgbasa ozi site na ọtụtụ isi – ọ bụghị naanị Netflix. ỌỌọ ọsọ ya nwere ike idobe vidiyo HD na Netflix doro anya na ndepụta nke ihe ndị mmadụ na-achọkarị.
Mayfọdụ n’ime unu nwere nakakakita ako ng VPN na -eme faịlụ P2P (Torrenting) ọsọsọ mana nke ahụ abụghịcha eziokwu. Ako ay bzi eziokwu bụ na iyi obodo ụfọdụ nwere ike ime ka egbuo gị nnukwu ma ọ bụ tụọ gị mkpọrọ ma ọ bụrụ na ejidere gị ihe na-ezighi ezi.
Hindi rin makukuha ang mga na-enye ọrụ ntanetị na-echegbu iyi mgbe ha na-ekwu na ndị nkesa P2P faịlụ na-eri ọtụtụ bandwidth dịnụ. Nke a arụpụtala ọtụtụ mgbe, na-ebelata ọsọ nke ndị ọrụ P2P.
Ezigbo VPN – dịka TorGuard, ga – enyere gị aka ịgagharị na kukuha ng mga ISPs ndị a. N’ezie, mgbe ị na-eji VPN na-akụ ihe, ISP gị agaghị napakaakwa na ag na-agba.
Anumang na-eji njikọ njikọta na nilalamanokwu a. WHSR nweta ụgwọ ntinye aka n’aka ụlọ ọrụ ndị a kpọtụrụ aha na nilalamanokwu a. Echiche anyị dabeere na ezigbo ahụmahụ na data nkesa data n’ezie.
Cómo construir un sitio web en GoDaddy
Новые планы хостинга управляемого VPS DreamHost – теперь с Nginx и твердотельными накопителями